သက်တန့်ချို: Sim Card များအား ၀ယ်ယူသူတိုင်းအား အခမဲ့ ပေးဝေသွားမည်
မိုးကောင်းကင်ကြီးက ပြာလဲ့လဲ့ နှင့် မနက်ခင်းက သာယာ စွာ လင်းလက်လျှက်ရှိသည် ။ စောစောစီးစီး သတင်း စာ စာမျက်နှာ ခေါင်းကြီးပိုင်းရှိ သတင်းတစ်ပုဒ်အားဖတ်မိလိုက်သည် ။
“ ယခုအချိန်မှစ၍ ပြည်သူအများ၏ ဆန္ဒအား အလေးထားသောအားဖြင့် Sim Card များအား ၀ယ်ယူသူ တိုင်းအား အခမဲ့ ပေးဝေသွားမည်ဖြစ်သည် ။ ဖုန်းခေါ်ဆိုခများအားလည်း တစ်မိနစ်လျှင် ၁၀ ကျပ်သို့ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်လိုက်သည် ။ ထို့အပြင် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီအချို့မှလည်း သူ့ထက်ငါ အပြိုင်အဆိုင် Sim Card များအား အခမဲ့ပေးဝေနေသည့်အပြင် တချို့ဆိုလျှင် ဆင်းန်ကဒ် တစ်ကဒ်ယူလျှင် ငွေဖြည့်ကဒ်တစ်ကဒ် နှင့် အကျီင်္တစ်ထည် ၊ တချို့ဆိုလျှင် ဆင်းကဒ် ယူလျှင် Nokia ဖုန်းတစ်လုံးပေးမည် ၊ တချို့ဆိုလျှင် ဆင်းန်ကဒ် ယူလျှင် Iphone 4S အား ထက်ဝက်ဈေးလျော့၍ပေးမည့်အကြောင်း အပြိုင်အ ဆိုင်ကြော် ငြာပေး လျှက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါသည် ”
အိုး--- ဒီလိုတွေတောင်ဖြစ်လာပြီကိုး ။ မင်္ဂလာရှိသော သတင်းအား ဖတ်ပြီးသည်နှင့် စိတ်လက်ကြည်သာစွာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သို့ ထွက်လာခဲ့၏ ။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် ရောက်နှင့်နေသော သူငယ်ချင်းများက စ၍ နှုတ် ဆက်လေသည် ။
“ မင်္ဂလာပါ ကိုသက်တန့်ရေ ”
“ မင်္ဂလာ နံနက်ခင်းပါဗျို့ ”
“ ဒီနေ့ ကြားရတဲ့ သတင်းတွေအကုန်သိပြီးပြီလားဗျ ”
“ ဆင်းန်ကဒ်တော့ဖတ်ပြီးပြီဗျ ၀မ်းသာစရာပဲ ”
“ ဆင်းန်ကဒ်တင်ဘယ်ကမလဲဗျ အခုဆို နိုင်ငံတော်က ကားတင်သွင်းခွင့် အခွန်တွေ ပယ်ဖျက်ပေး လိုက်ပြီ တဲ့ဗျ နိုင်ငံခြားက ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ ၊ ၂၀၀၀ တန်ကားတွေကို မူရင်းဈေးအတိုင်း ဒီမှာ ၀န်ဆောင်ခ နည်းနည်းနဲ့ ၀ယ်ယူနိုင်ပြီလို့ အတိအလင်းကြေငြာလိုက်ပြီဗျ ”
“ ၀ိုးးးး တကယ်လားဗျ ”
“ တကယ်ပေါ့ဗျ ကျွန်တော်ကနောက်ပါ့မလား ဒါတင်မကသေးဘူး အခုဆို လာမယ့် ၃ နှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံက စင်ကာပူမြို့ထက် တောင် ခမ်းနားခေတ်မီအောင် မွမ်းမံ ပြင်ဆင်ကြတော့မယ်တဲ့ ဘယ်လောက်ကောင်း လိုက်သ လဲ လူနည်းစု သူဌေးကြီးတွေကို အခွန် တိုးကောက်ခံပြီးလူများစု အခြေခံလူတန်းစားတွေကို အ ခွန်တွေလျော့ပေါ့ပေးတော့မှာတဲ့ ”
“ မပြီးသေးဘူးနော် ၀န်ထမ်းလစာတွေကို တစ်လ ၂ သိန်းသတ်မှတ်ပေးလိုက်ပြီဗျာ ကဲ ဘယ်လောက်တောင်ဝမ်း သာစရာကောင်းသလဲ ”
သတင်းများကို ကြားပြီး ပီတိဖြစ်နေခိုက် အနားမှ တစုံတခုက ၀င်တိုက်လိုက်သလိုဖြစ်ပြီး “ ၀ုန်း ” ကနဲ အသံကြီးကို ကြားလိုက်ရလေသည် ။
မျက်လုံးထဲ ကြယ်တွေလတွေမြင်ပြီးနောက် မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်သောအခါတွင် အိပ်မက်မက်ပြီး ကုတင်ပေါ်မှ ပြုတ်ကျခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရလေတော့သည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 11:48 AM
သဒ္ဓါလှိုင်း March 6, 2012 at 11:54 AM
နာနော်. မောင်သက်တန့်တစ်ယောက်တော့.. မက်ပဲမက်နိုင်လွန်းတဲ့အိပ်မက်၊ ဟွန်းးးးးးးးးး
haha i think really but not
ဒီလိုမျိုးဖြစ်မဲ့ အချိန်က ဘယ်တော့များလဲကွယ်
ပြည့် March 8, 2012 at 10:39 AM
ရင်ခုန်အောင်လည်း ရေးတတ်လိုက်တာ...... တကယ်ဖြစ်လိုက်ပါလားလို့......
Z@! March 8, 2012 at 11:37 AM
အိပ်မက်ရဲ့အလွန်မှာတော့.. တကတ်နှစ်သိန်းတဲ့.. ဟီးဟီး.. :D
cute March 10, 2012 at 11:31 AM
ဟာဟ ဖြစ်ရမယ် :)
မဒမ်ကိုး March 12, 2012 at 12:42 PM
ဟဟဟ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီး)))
aungaung March 12, 2012 at 3:21 PM
အဲ့ဒါတွေကိုအိမ်မက်လို့မထင်လိုက်နဲ့တကယ်ဖြစ် နေပြီ သိရဲ့လား။
Anonymous August 24, 2012 at 3:32 PM